R/W Kheyre oo ka hadlay xiriirka isaga iyo Farmaajo iyo haddii uu khilaaf jiro - Caasimada Online
Home Warar R/W Kheyre oo ka hadlay xiriirka isaga iyo Farmaajo iyo haddii uu...
R/W Kheyre oo ka hadlay xiriirka isaga iyo Farmaajo iyo haddii uu khilaaf jiro
Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda Federaalka Somaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in taariikh cusub ay tahay Madaxweynaha iyo isaga oo wada shaqeeyay wax ka badan sideed Bil in weli howsha ay ku socoto buuq la’aan is qabqabsi la’aan iyo wixii la mid ah.
Wuxuu tilmaamay Ra’iisul Wasaaraha in dalka rajo aad u wanaagsan leeyahay, islamarkaana muhiim ay tahay in loo wada istaago dib u dhiskiisa iyo ka shaqeynta amniga.
Si gaar ah wuxuu ula hadlay Ra’iisul Wasaare Khayre dhallinyarada Soomaaliyeed oo uu sheegay in fursadda kaliya ee dalka uu haysto iyaga yihiin.
“Bilawga Madaxweyne iyo Raiisal Wasaare wada shaqeeyay Sideed bilood ka badan iyadoo maalin la idiin sheegin way is dagaalsan yihiin miyaanay taariikh ahayn ka duwan tii ka horreysay, waxa uu leeyahay wadanka rajo weyn, rajada weyn ee uu leeyahay waxay tahay in idinku (Dhallinyarada) aad soo jeedsateen” ayuu yiri Ra’iisul wasaaraha.
Ra’iisul wasaaraha oo hadal ka jeedinaayay kulan xalay ka dhacay Muqdisho, looguna magac daray kacdoonka Nabadda ayaa sheegay in xukuumaddiisa mudadii yareed ee ay jirtay ay wax badan qabatay, haatanna diyaar u yihiin in dalka wax badan u qabtaan.
Mudadii ay jirtay dowladda uu hoggaaminayey Madaxweyne Farmaajo ayuu sheegay Ra’iisul wasaaraha in Soomaaliya aan loo soo raacan deyn haba yaraatee.